I-Bolero iyigugu lezinto zokugqoka kanye nesigqebhezana se-fashionista encane. Kuzofakazela ukugqoka nokugqoka futhi okufudumele. Ungazixhumanisa ngokwakho.
Ngokuba intombazane iminyaka engu-4 bolero:
3 isigamu se-woolen noboya be-wool of 50 amagremu 150 ubude
Izinaliti 3 mm
Iphethini laleli bolero liwuxande, uhlangothi olulodwa lisuka emthonjeni wethanga kuze kube ubude bomhlane entanyeni, futhi ububanzi obufunayo bekholomu, ngakolunye uhlangothi lilingana nesilinganiso seminyaka engu-2 yesilinganiso nobubanzi bomhlane.
Sixhuma isampula yamathrekhi, ama-loops angu-12 ububanzi nemigqa engu-12 ngokuphakama. Sizolinganisa isampula bese sibalwa ukuthi zingaki izilophu okufanele zifakwe futhi kufaneleke kangakanani ukuthola i-toilevas yesayizi oyifunayo. Sizungeza inani lamalokithi ku-multiple of 4.
Sakhetha ku-alamu inombolo ethile yezikhiya bese siyihlanganisa nge-band 2x2 enwebekayo (sasihlanganisa ngamabili ama-loops amabili nobuso ababili). Uma sihlanganisa ohlangothini olungalungile, sihlangene njengoba izikhonkwane zibukeka, njll. Sidonsa ama-loops ahlangene phezu kwamaconsi emhlane, sidonsa izilophu ezinamathele phezu kobuso bomkhiqizo. Uchungechunge lwebuso luqala futhi luphela nge-loop ebusweni, futhi sithunga uchungechunge lwe-purl ekuqaleni nasekupheleni komunye wabangalungile. Imigqa ebusweni iboshwe ngale ndlela: 1 phambili nangokwesokunene 2 iziphuphu zamacici, ubuso obubili, buphelele nge-1 loops ebusweni. Ngakho-ke, lapho uhlanganisa le ngxenye, ungakwazi ukufeza i-suture engacacile futhi enhle.
Ngakho sasibopha indwangu ebude obudingekayo. Sizosusa ithawundle bese sivale izikhiya. Gcoba indwangu engxenyeni yonkana. Sizokwenza izikhala ze-lateral, sizoshiya izandla slot. Sizofaka imiphetho ye-bolero ngephethini evulekile noma ibhanti elinqanyuliwe. Sebenzisa izinaliti zokudoba noma zokubopha.
Siphinde sihlobise i-bolero ngezimbali ezivela kumathebulethi we-satin noma izimbali eziboshiwe noma sizokwenza i-hook hook, inkinobho, ne-ribbon.
Ake sizame inguqulo ekhishiwe. Ngenxa yalokhu, ngaphambi kokuhlanganiswa komhlangano nangemva komhlangano, sizohlangana ndawonye emaphethelweni entanyeni i-loop eyengeziwe futhi ihlanganiswe, kuze kube yilapho indwangu iba yindawo ephakeme oyifunayo. Vala ama-hinges bese ugoqa phezulu kwendwangu, ngenkathi wenza ihood.
Zama ngezakhi futhi ubophe futhi uthole i-bolero yezingane eziyingqayizivele, kuyoba umhlobiso we-fashionista encane.
Indabakwane kaNcibijane ngezandla zabo siqu, noma Indlela yokwenza imicibisholo esihlahleni sikaKhisimusi
Ibhokisi le-Origami enezandla zakho
I-Pesto di Presemolo
U-Valery Leontyev uhlela ukurekhoda i-duet noVladimir Putin
Izindlela zokugqoka isikhala
Isaladi nge-corn, corn and apple
Ingane ayikwazi ukusula umphimbo wakhe
I-Metabolism. Ukwenziwa kwama-carbohydrates lipoids
Izimpawu nokudla okunempilo ku-hepatitis C
Amaswidi e-chocolate nge-almond-orange stuffing
Ungangena kanjani isigqi sokusebenza ngemva kwamaholide
Ukufudumala ubuso nesentamo isikhumba ekhaya
Imilenze yenkukhu e-puff pastry
I-Cryosauna: isipiliyoni kanye nesipiliyoni somuntu siqu sokuvakashela "isiqandisini somlingo"